Izinwele ezifakelwayo ezinamakhanda ezinwele
Ubuhle nempilo Izinwele
Inani elikhulu labesifazane liphupha ngezinwele ezinde. Yebo, angakhula, kodwa lokhu kudinga isikhathi esiningi nokunakekelwa ngokucophelela. Futhi kuthiwani ngalabo abafuna ukuba nama-curls amade kakade kusasa edilini lokuphothula iziqu noma umkhosi wokuhlonipha lomshado? Kufanele basebenzise okunye okungabizi futhi okuhle - izinwele ezingamanga zokufakelwa ezinsizeni zezinwele.
Izinzuzo nezindleko zezinwele zokufakelwa ngezinwele zezinwele
Inzuzo enkulu yezinsimbi zokufakelwa nezinwele ezikhungweni zezinwele ziwukuthi, uma uzithengile, ungashintsha ubuhle bakho bekhanda futhi, uma uthanda, ngaphandle kokusebenzisa ukwakheka kwezingubo. Ngesikhathi esifanayo bashibhile kakhulu kunokwemvelo, futhi bangasetshenziswa inani elingenamkhawulo izikhathi.
Izinwele ezifakelwayo eziphepheni zezinwele ziphephile ngokuphelele: kungakhathaliseki ukuthi uzigqoka kangakanani, ngeke zilimaze izintambo ezihlanganisiwe. Abakhiqizi benza izinhlobonhlobo zezinwele ezinjalo, ngakho-ke owesifazane ngamunye uzokwazi ukuthatha umbala "wakhe".
Naphezu kwezinzuzo eziningi kangaka, kunezinwele zokufakelwa kanye nezinsimbi zokugqoka. Lokhu kufaka:
ukubunzima kokunakekelwa - kunzima ukuzinakekela, kanti uma lokhu kungenziwanga, khona-ke ngokusebenzisa amasokisi amabili azoba phansi;
ukungabi khona kwebala - nabo ungenza inani elikhulu lezinwele zezinwele, kodwa awukwazi ukuwadweba;
ukulungisa amaphuzu - faka izinwele ezinjalo zifakwe kwezinye izindawo, ngaphandle kwalokho zizobonakala.
Izitayela zezinwele ezinezinwele zokufakelwa ngezinwele zezinwele
Ngokuvamile, sebenzisa izinwele zokufakelwa ngezinwele zezinwele, ungenzi izinwele, uzihlanganise eziqongweni ukuze unike ivolumu nobude izinwele. Ungathola izintambo ngaphansi kwezingqimba ezingaphezulu bese izinhlayiya zingaqoqwa emsila ophezulu noma ophansi, into esemqoka ukubuka ukuthi izinwele zezinwele azibonakali. Uma izinwele zokufakelwa zisetshenziselwa lolu hlobo lokuzakhela ezinsizeni zezinwele, khona-ke kungenzeka ukuba wenze imisila evumayo ewela ehlombe, enezinhlangothi eziboshwe ezinwele.
Ukusebenzisa lezi zingxube ungakwazi ukulinganisa izigxobo ezikhangayo noma izimbali emqhele. Futhi ama-fashionistas zanamuhla ngosizo lwabo adala ezinhlokweni zezinwele ezisekhanda ezivela emabhokisini ahamba phambili ekhanda, enikezwe ngokufana.
Usebenzisa izinwele ezibophekile ezinamakhanda ezinwele, ungakwazi ukwandisa kakhulu umthamo wezinsimbi, ubonise konke ukunethezeka kwama-curls awo engokwemvelo. Ngokwenza kanjalo, zibophe ngokukhululekile, ngakho-ke, owesifazane ngamunye angenza isibopho sakhe saseFrance, umsila wezinhlanzi bese ehlanganisa ngokuzimela ekhaya.
Ukunakekela izinwele zokufakelwa ngezinwele zezinwele
Uma usebenza izinwele ezenziwe ngokuqondile nama-wavy ezinkambeni zezinwele, kufanele ulandelwe imithetho eminingana:
Amathanga adidekile kakhulu, ngakho kufanele ahlale ehlanjululwa, ikakhulukazi uma amane ehlanganiswe phezulu kwekhanda.
Ungalokothi ushintshe izinsimbi ezivamile zokufakelwa futhi uqondise izinwele ezikhazimulayo.
Ukufakela ama-hairpins, yenza isikhala esincane phakathi kwabo, njengoba sitholakala eduze komunye nomunye, bazokwenza umphumela wekhanda elikhulu.
Ukuze uhlanganise nalezi zinwele kulandela inhlanganisela engavamile, kungenjalo izinwele zingase ziwe ngaphansi kwezinwele.
Ungafaki i-varnish ephepheni lamatshe - awaziboleki ekulungiseni.
Ngemuva kokukhipha izikhonkwane, zibeke ezikhungweni ezikhethekile, ngakho ungavikela ama-curls ekungcolile nasekuthulini.
Ungashiyi izinwele zakho izinwele zakho ebusuku, ngoba ekuseni zizophangwa ngenxa yokuthi zididekile kakhulu.
Futhi ekunakekeleni nsuku zonke izinwele zokufakelwa ngezinwele zezinwele kumele kufaka ukuhlanzwa kwazo, kepha izinqubo zamanzi azidingi lutho, vula nje izintambo ngendwangu emanca. Uma ama-curls engenawo isikhathi sokuma ngaphambi kokuwasebenzisa, ungalokomise nge-hairdryer, kungcono ukusula ithawula.
Jojoba amafutha wezinwele
Izitayela zezinwele nge-ribbons
Indlela yokubopha umsila wenhlanzi?
Indlela yokubeka ngokushesha ikhanda elingavuthiwe: izinwele zezinwele ezingcolile
Ukuqwashisa nge-wax ekhaya
Izandiso zezinwele ezishisayo
Amafutha we-Castor ezinwele - isicelo
Amakhanda ezinwele ezincane zezinwele ezinhle
Umbala wezinwele ze-Copper
Ukupheka kokukhula kwezinwele
Ungenza kanjani ukukhiya izinsimbi?
Indlela yokunikeza ivolumu izinwele ezincane?
I-Mango - Spring-Summer 2014
Sterilizer for amathuluzi
Ibhuloho lekhulu leminyaka
Sika ekhishini letshe lokufakelwa
Indlela yokukhetha izibuko ezibukwayo - khetha izesekeli ezifanele ngokusho kobuso besimo
Imvubelo inhlama ye-pie
Ingabe izingane zinayo uLeonardo DiCaprio?
I-Saftey Park Givskud
Igazi lapho ukhulelwa kuqala
Irina Sheik - makeup
Ungasusa kanjani i-hangover syndrome?
Uma ukhwehlela, kubuhlungu esifubeni
Sign - le nyoni yawela ngefasitela
Ungayibona kanjani i-maniac?
Ungabuyela kanjani umyeni wakhe ekhaya ngosuku olulodwa?
Indlela yokuhlanza isisu esingaphansi?
UBill Murray wathola umklomelo waminyaka yonke weMark Twain
Imibono yezipho zoNyaka Omusha ngezandla zabo
I-Immunoglobulin E iphakanyisiwe
© 2021 zu.tierient.com